Mon Mon's Diary: သား ၂ယောက်လုံးရဲ့ အမှုအကျင့်လေးများ
သားကြီးက ၅နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ ရန်ကုန်မှာဆို သူငယ်တန်း .. ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက် ရန်ကုန် ပြန်တုန်းက သူငယ်တန်းဖတ်စာ ဝယ်လာတယ် ... ၅နှစ်ပြည့်ပြီး မကြာဘူး ... တရုတ်စာ အိမ်ခေါ်သင်တယ် ... မိဘက တရုတ်စာ မရေးတတ် မပြောတတ်တော့ သားကြီး အခြေအနေ သိရအောင် ထားတာ .. အိမ်မှာသာ မပြောတာ ... အကုန်နားလည်တယ် .. ပြောနိုင်တယ် ... ရေးနိုင်တယ် ... အရေးက အရမ်းပျင်းတယ် ... တစ်မျက်နှာ ဘယ်တော့မှ မရေးဘူး ... တဝက်ပဲ ရေးတယ် ... သားကြီးက ဉာဏ်အရမ်းကောင်းတယ် ... တစ်ခါပြရင် မှတ်မိတယ် ... အလွတ်ပြန်ရေးနိုင်တယ် ... ဒါပေမယ့် ဉာဏ်ကောင်းလွန်း အားကြီးလို့လား မသိဘူး ... တအားပျင်းတယ် ... အိမ်မှာ မွန်မွန်က English, Chinese, မြန်မာစာ သင်တယ် ... အဖေက Maths သင်တယ် ... အပေါင်း အနှုတ်ကတော့ ရနေပြီ …
English ကတော့ Library က စာအုပ်ငှားပြီး ဘယ်လောက်နားလည်သလဲ ဘယ်လောက်ဖတ်တတ်သလဲဆိုတာ သင်တယ် ... မွန်မွန်လဲ တချို့ စာလုံးတွေဆို အသံထွက်မသိတော့ dictionary ဘေးထားပြီး သင်ရတယ် ... Popular က K1 K2 စာအုပ်ဝယ်ပြီး သင်တယ် ... ၁လစာ ဝယ်တယ် ... အများကြီးလဲ မဝယ်ပေးနိုင်ဘူး .. ၃၀ ဖိုးလောက်တော့ ဝယ်တယ် ... သင်ရင်နဲ့ လွယ်တဲ့ စာလုံးဆို စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲ မှတ်ထားပြီး သားကြီးကို တစ်နေ့ ၃လုံး သို့မဟုတ် ၅လုံးသင်တယ် ... ကျက်ခိုင်းတယ် ... အလွတ်ရေးခိုင်း ဆိုခိုင်းတယ် ... English က words ကိုတော့ သိနေရမယ်လေ ... သားကြီးအတွက် လက်ရေးလှစာအုပ်နဲ့ ကျင့်ခိုင်းထားတယ် .. ဘယ်လောက်ရေးလဲဆိုတော့ တဝက်တောင် မကျိုးသေးဘူး ... ရေးရမှာ တော်တော် ပျင်းတယ် ... စာလုံး ၁လုံး ၃ကြိမ်ထက် ပိုမရေးဘူး ... မွန်မွန်နဲ့ဆို နာရီဝက်ထက် ကျော်ပြီး သင်လို့မရဘူး ...
တရုတ်စာကတော့ ဆရာမက မြန်မာလို အသံထွက် အဓိပ္ပါယ်ရယ် ရေးပေးတော့ တခါတလေမှ မေးကြည့် အလွတ်ချရေးခိုင်းကြည့်တာ ... တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံး ၁ရက်တော့ လုပ်ရတယ် ... တရုတ်စာ ဘာလို့သင်လဲဆိုတော့ ဒီမှာက မိဘတွေက ကလေးတွေအတွက် အရမ်း stress များတယ် ... သားသမီးတွေကို ဖြစ်စေချင်ကြတာ .. အပြိုင်ပေါ့ ... ကြားရဖန်များတော့ မွန်မွန်လဲ stress ရလာတယ် ... အဲဒါနဲ့ အိမ်ခေါ်သင်ဖြစ်သွားတယ် …
မြန်မာစာကတော့ နေ့တိုင်း ၅ရက် သင်ဖြစ်တယ် ... သင်ခန်းစာ ၁ခုကို ကျေညက်အောင် ၁ပတ်သင်တယ် .. ဒီလိုအရွယ်တွေက စာကို သင်ချင်စိတ်ရှိအောင် လုပ်ရတယ် ... သားကြီးက ကားကြိုက်တယ် ... Figures လေးတွေ ကြိုက်တယ် .. စသင်သင်ချင် အဲဒီလိုလေး လုပ်ရတယ် .. အမေနဲ့ဆို မသင်ချင်ဘူး ... အမေ သင်ပေးရတဲ့ ဘာသာရပ်တွေက မှတ်ရတာတွေ များတာကိုး ... စာသင်မယ်ဆို အမေနဲ့ ရန်ဖြစ်ရတာ ခဏခဏ ... နောက်ဆို သားကြီးကို မဆူအောင် စိတ်ထိန်းရမယ် ... အခုလောလောဆယ် ငြိထားလို့ အဆင်ပြေနေတယ် ...
၅နှစ် မပြည့်ခင်က သားကို တရုတ်စာ စထားမယ်ဆိုတော့ မလိုက်နိုင်မှာစိုးတယ် .. ဒါကြောင့် ၅နှစ်ပြည့်မှ စထားဖြစ်တယ် ... Section က အပ်လို့မရတော့ဘူး ... အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး အိမ်ခေါ်သင်ရတယ် .. အိမ်ခေါ်သင်တော့ စာဘယ်လောက်လိုက်နိုင်လဲ သိရတယ် ... Section ပို့ရင် လူများတော့ တစ်ယောက်ခြင်း အခြေအနေ အသေးစိပ် မသိနိုင်ဘူး ... ယေဘုယျလောက်ပဲ သိမှာလေ ... တရုတ်စာကို သားကြီး မလိုက်နိုင်ဘူး မရဘူး ထင်ထားတာ တကယ်တမ်း သင်တာ နားထောင်ကြည့်တော့ ရတယ် ... သားကြီးက ပြောသေးတယ် ... ဖေနဲ့မေက တရုတ်လို မတတ်ဘူး ဒါကြောင့် တရုတ်လို မပြောဘူး ... English and Myanmar လိုပဲ ပြောမယ်တဲ့ ... အဲဒါကို မြန်မာလို ပြောသွားတာ မဟုတ်ဘူး ... English လို ပြောသွားတာ …
သားကြီးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတော့ ပို့ချင်တယ် ... မြန်မာ စကားထက် လိမ္မာ ယဉ်ကျေးဖို့လိုတာပါ ... Burmese Culture ကိုသိဖို့ အရေးကြီးတယ် ... သားကြီးကို အိမ်မှာ English ပြောရင် ဗမာလိုပါ ပြန်ပြောပေးတာ .. အခု သားကြီးကို ညာလို့ မရတော့ဘူး ... ဗမာလို တော်တော် နားလည်နေပြီ ဗမာလိုကနေ ဒါက English လို ဒီလို ခေါ်တာ မဟုတ်လား ဆိုတာ ပြောသေးတာ ... မွန်မွန်ယူဆတာတော့ ဘယ်လူမျိုးမဆို ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားကို မမေ့သင့်ဘူးထင်တာပဲ ...
ကလေးတစ်ယောက်ကို သင်ရတာ မလွယ်ပါဘူး ... ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အထာသိမှ ရမှာလေ .., ကလေး အထာမသိပဲ သင်လို့မရဘူး ... ကလေးကို စာသင်ရင် ဘယ်ကစပြီး သင်ရင် ပိုစိတ်ဝင်စားမလဲဆိုတာ အတော်လေးလိုပါတယ် ... မွန်မွန်တောင် အခုချိန်ထိ ကျင့်ယူနေရတုန်း ... သားကြီးကတော့ သူကြိုက်တာလေးတွေနဲ့ မျှားလို့ရတယ် ... နာရီဝက်ထက် ပိုသင်လို့ မရဘူး ... ဒါပေမယ့် ဆရာမနဲ့ စာသင်ရင်တော့ ၂နာရီထိရတယ် ... Chinese Tution မထားခင်ကတည်းက အဲဒီ ၂နာရီလုံးလုံး ထိုင်နိုင်ပါ့မလား စိုးရိမ်ခဲ့ရတာ ...
သားကြီး အကြောင်းရေးပြီးသွားတော့ သားငယ်လေး အကြောင်း ရေးရဦးမယ် ... သားငယ်လေးက ၁နှစ်ပြည့်သွားပြီ ... လမ်းမလျှောက်တတ်သေးဘူး ... လမ်းလျှောက်ရဖို့ ကြောက်နေသေးတယ် ... ကိုယ့်ဟာကိုယ် မတ်တပ်ရပ်တပ်နေပြီ ... အပေါ်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် တက်တက်နေပြီ ... အပေါ်ကနေ အောက်ကိုလဲ ဆင်းတတ်နေပြီ ... အဖေလုပ်သူက ကစားကွင်းခေါ်သွားပြီး လျောစီးတာ သင်ပေးထားတော့ အိမ်ရောက်ရင် ကုလားထိုင်ပေါ်ထိုင်ပြီး ကိုယ်ကို လျောချပစ်တာ ... လျောစီးသလိုမျိုးလေ ... အစက ဘာလုပ်မှန်း မသိဘူး ... နောက်မှ အဖေက ကစားကွင်းခေါ်ပြီး ပြထား ဆော့ထားတော့ လျောစီးချင်နေတာ ... သား၂ယောက်ရှိတော့ ဝယ်ပေးရင် ၂ခု ဝယ်ပေးတယ် .., အရောင်တော့ခွဲထားတယ် ... သားငယ်က အရုပ်ဆင်တူရှိနေလဲ အကိုဟာပဲ လာလာလုတယ် ... အကိုနဲ့လဲ ခဏခဏ ရန်ဖြစ်တယ် ..
တခါတလေ အကိုလုပ်သူကို စိတ်တိုလာရင် ဆွဲကုတ်ပစ်တာ ... အကို လုပ်သူက ပြန်တော့ မလုပ်ဘူး ... အဖေနဲ့ အမေကို ငိုပြီး လှမ်းတိုင်တယ် ... သားငယ်က အခု ၁နှစ်ပြည့်ပြီးကတည်းက ဆန်ပြုတ် မစားတော့ဘူး ... ထမင်း စစားနေပြီ ... သားငယ်က အစားအသောက်ဆို ဘာကျွေးကျွေး အကုန်စားတယ် ... သားကြီးက အပြင်စာ မစားဘူး .. အိမ်က ချက်တဲ့ ထမင်း ဟင်းပဲစားတယ် ... သားငယ်က ထွားတယ် အရပ်မြင့်တယ် ... သားငယ်က စားသလောက် ၀၀ လာတယ် ... သားကြီးက ဘယ်လောက်စားစား ပိန်တယ် ... လက်ခုပ်တီးတတ်တယ် ... မေ့မေ့ သားငယ်လေး ဘယ်မှာလဲဆိုရင် ရင်ဘတ် ပုတ်ပြတယ် ... မချိုမချဉ် မျက်နှာပေး အားကြီး လုပ်တတ်တယ် ... သားငယ် အရှေ့ 1 to9ဆိုပြရင်9ပြီးရင် 10 ဆိုပြီး ပြောတတ်တယ် ... တစ်ခုခု လိုချင်ရင် လက်ညိုးနဲ့ ခိုင်းတတ်လာပြီ ... သားငယ် နေမကောင်းရင် တအားဂျီကြတယ် ... ဆေးတိုက်ရခက်တယ် ... အဲဒီတော့ ရေပတ်တိုက်ပေးတယ် ... ပြီးရင် အမေကို အနားအကပ်မခံတော့ဘူး ... အုပ်ဆေး အုပ်ပေးတယ် ... အုပ်ဆေးက ချွေးထုတ်တဲ့ အုပ်ဆေးပါ ... မန္တလေးကနေ မှာရတာ ... နန်းတွင်းသုံး ဗမာဆေးတွေ ... မွန်မွန် ငယ်ငယ် ကတည်းက အဲဒီ့ဆေးတွေနဲ့ပဲ ကြီးလာခဲ့တာ ... ဆေးက တကယ်ကောင်းတယ် ... ချွေးထုတ်ဆေး အုပ်ပြီးသွားရင် ချွေးက တကယ်ထွက်လာတာ ... ငယ်ငယ်က အတော်ငြိမ်သလောက် အခု ဆော့တတ်လာပြီ ... ကုလားထိုင်ခုံပေါ်ကို တက်တပ်နေပြီ ဆင်းတတ်နေပြီ ... ကိုယ်လုံး သိပ်မထိန်းနိုင်သေးဘူး ... အစားကတော့ တကယ်စားတယ် ... သားငယ်က သတ္တိခဲလေး ... ကာကွယ်ဆေးထိုးတာ တချက်မှ မငိုဘူး ...
သား၂ယောက်လုံးက အစာကျွေးတာတော့ မခက်ဘူး ... အဲဒီအတွက် မိဘက စိတ်မညစ်ရဘူး ... ပူတော့ မပူဆာတတ်သေးဘူး ... ဈေးသွားရင်တော့ ပစ္စည်းတွေ ဆွဲချတတ်နေပြီ ... အရုပ်လဲ ဆွဲချတယ် ... အကို ကျောင်းက ပြန်လာရင် အကိုရှိတဲ့နေရာ တောက်လျောက် လိုက်တယ် နေတယ် ... ဘယ်သူမှ အခန်းထဲ မရှိရင် မနေဘူး ... လက်ညိုးထိုးပြီး သွားမယ် ဆိုတာချည်းပဲ ...
ဒီစာရေးနေချိန် Mickey's K1 Parents- Teachers Meeting မှာ
Strong Point - Mickey က English မှာ Listening & Reading အရမ်းကောင်းတယ် ... အထူးသဖြင့် Reading ... ၁ပတ် ၁ကြိမ် Library သွားပြီး စာအုပ် ၄အုပ် ငှားပြီး အိမ်မှာ ညတိုင်းဖတ်ရတယ် .. တရုတ်စာမှာ Reading & Writing ကောင်းတယ် ... Group နဲ့ စာသင်လို့မေးလိုက်ရင် အရင်ဆုံး ဖြေတာ Mickey တဲ့ ...
Weak Point - English စာ ရေးတဲ့ Writing နေရာမှာ ရေးပုံရေးနည်း တချို့စာလုံး နည်းနည်းလွှဲနေတယ် ... English Writing အားနည်းတာ ဉာဏ်အရမ်းကောင်းတော့ သင်လိုက်ရင် ၂လုံးလောက်ရေးပြီးရင် ရေးတတ်တော့ ဆက်မရေးတတ်တော့ အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာ .. တရုတ်စာမှာ Speaking က ပြောပေးရမယ် ... မပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူး ပိုပြီးသွက်လာအောင် ... ဘာမဆို I want to be the Winner & I want to be the first ဖြစ်ချင်တာ ... မဖြစ်ရင် အရမ်း စိတ်ဆိုးတာ .. အဲဒါလေးကို ပြင်ယူရမယ် ...
Parents & Teachers Meeting က ၁နှစ် ၂ကြိမ်လုပ်တယ် ... နှစ်စဉ် June & December မှာ ... ကလေးတိုးတက်လား ဆိုးလား လိမ္မာလား စာတော်လား အကုန်သိရတယ် ...
ကျောင်းမှာ ဘာ Activity လုပ်ထားလဲဆိုတာ သိရတယ် … ကျောင်းတိုင်းတော့ မိဘ မခေါ်ပါဘူး ... ကျောင်းပေါ်မူတည်တယ် ထင်တာပဲ … ကျွန်မကတော့ သားတွေ အပေါ် Stress အရမ်းများတယ် … ဖြစ်ချင်လွန်း အားကြီးတာကိုး … တခါတလေ စိတ်တော်တော်လျော့ထားရတယ် … သားကြီးကျောင်း ဆီက တော်တယ် ဆိုတာ ကြားရတယ့်နေ့ဟာ ကျွန်မအတွက် အပျော်ဆုံးပါပဲ … ရှိသမျှ အကုန်မေ့တယ် …
နောက်မှ ထပ်ပြီးဆက်ရေးဦးမယ်နော် …
Blog လာလည်သူအားလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ …
at 8:59 PM Posted by Myo Mon Yee Oo
မြန်မာ သံရုံးမှာ သူငယ်တန်းသွားအပ်ဖြစ် သေးလား။ လာမယ့်စနေနေ့ မှာလည်း လက်ခံမယ်ကြားတယ်။ သမီးကြီးကို တော့ တိုပါးရိုးမှာ တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း မြန်မာကျောင်းသွားပို့ဖြစ်တယ်။ သမီးနှစ်ယောက်လည်း ဘာဝယ်ဝယ် အကုန် ဆင်တူဝယ်နေရတယ်။
သားငယ်က အရုပ်ဆင်တူရှိနေလဲ အကိုဟာပဲ လာလာလုတယ်
အဲဒါ အတူတူပဲ .. သားငယ်က အစ်မဟာကိုပဲ လုတယ် ...
သားကြီးက စာတွေ တော်တော်လုပ်နေပြီပဲ ..မှုံတော့ဘာမှ သိပ်မတတ်သေးဘူး
အပေးအယူနဲ့ပါပဲ ... စာရေးနေရင် Mickey ကျားယုံ ကျားယုံ ... Clever Mickey .., အာပေါက်မတတ်ပြောရတယ် ... နာရီဝက်ထက် ပိုသင်လို့မရဘူး... စိတ်လိုလက်ရဆိုရင်တော့ အသားကုန်လုပ်တယ်
Mind stretcher at 313 clementi not bad for k1 eng n math combine..2hrs..